Dowlada cusub maxay ka badali doontaa arimaha Socdaalka? | Somaliska
Dowlada cusub maxay ka badali doontaa arimaha Socdaalka?
Dowlada cusub ee Sweden oo ay si wadajir ah u soo dhisayaan xisbiyada Socialdemokraterna (S) iyo Miljöpartiet (MP) ayaa bilowday in ay soo bandhigto qoryaasheeda cusub. Wargeyska DN ayaa saakay qoray in xulufada dowlada cusub ay isku raaceen in aan waxba laga badalin arimaha socdaalka.
Xisbiga MP ayaa ka dhaadhiciyay xisbiga Socialdemorkaterna in ay aqbalaan heshiiskii ay MP horey ula galeen dowladii hore, kaasoo ka dambeeyay in Soomaalida lala mideeyo caruurtooda oo DNA laga qaado. Heshiiskaas ayaa Miljöpartiet iyo Alliansen wada gaareen sanadkii 2012. Dowlada cusub ayaan waxba ka badali doonin heshiiskaas.
Jimcadii hore ayaa musharaxa raysal wasaaraha Stefan Löfven uu sheegay in uu dowlada cusub la dhisayo xisbiga Miljöpartiet iyadoo wasiirada cusub la soo magacaabayo maalinta jimcaha.
Maria Ferm oo horay xisbiga Miljöpartiet u qaabilsanayd arimaha Socdaalka isla markaana ahayd qofkii heshiiska la galay dowladii hore, ayaa ka dambaysa heshiiska cusub ee Miljöpartiet iyo Socialdemokraterna ay wada gaareen. Maria ayaa hada loo doortay in ay noqoto hogaamiyaha kooxda Miljöpartiet u fadhida baarlamaanka.
Bandhiga Shaqada Västerås iyo Soomaalida [Video]
September 30, 2014 at 17:10
war baasabuurka 5sano hakadhegaan mp waa yaabanahay soomalidana sharciga ha o fududeyaano
October 11, 2014 at 19:38
asc all aqyaar gaar ahaan farax iyo abdirizak waan salamayaa oo kala jooga sweden iyo kampala